Item-ရင်ဘတ်မီးပုံ အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
ရောင်းချသူ: Yoon Mie
?Order-to cb?? Instock မို့ မှာပြီး ၂ရက်​ အတွင်း ပို့ပေးပါတယ်​​ ရှင်​ ❤
? ရန်​ကုန်​မြို့တွင်း အိမ်​အ​ရောက်​ပို့ Deliveryရှိပါတယ်​ ..
? နယ်​မြို့များ ​ငွေလွဲ ၀င်​သည့်​​နေ့ ည​နေ ပို့​ပေးပါတယ်​ရှင်
#ပစ္စည်းအသင့်​ရှိ ❤◦.¸¸. ◦✿